दलान नेपाल : 2014
झापा, मोरड र सुनसरीका लागी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
पुर्वी तराईका झापा, मोरड र सुनसरीलाई मधेश प्रदेशमै राख्नका लागी केही दिन अगाडी गठन गरिएको संघर्ष समितीले आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन । झापा, मोरड र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पठाईएको ज्ञापन पत्र मार्फत समितीले ती तीन जिल्लालाई पहाडमा नगाभ्न समेत चेतावनी दिएका छन । संघर्ष समितीले पुर्व ती तीन जिल्ला मधेश आन्दोलनको महत्वपुर्ण भु भाग भएको भन्दै मधेशमै राख्न आग्रह गरेका छन ।
झापा, मो्रड र सुनसरीमा केही दिन अघि देखि सक्रिय संघर्ष समितीले स्थानिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन । मधेशी पार्टीहरुको त्यस क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको अगुवाईमा सुरु गरिएको यो अभियानमा त्यस क्षेत्रका अन्य संगठनहरु पनि सामेल हुन थालेका छन ।
पढनुस ज्ञापन पत्र
आन्दोलनमा जानु पर्ने मधेशी वुद्धजिवी तथा युवा नेताहरुको भनाई
नयां संविद्यानमा मधेश आन्द्योलनको मर्म अनुसार संघियता दिन काग्रेस एमाले तयार नरहेको भन्दै मधेशी वुद्धजिवीहरु तथा मधेशी पार्टीहरुका युवा नेताहरुले बताएका छन । मंगलवार काठमाडौमा ‘स्वाभिमान मधेश विचार समुह’ ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वुद्धजिवीहरु तथा युवा नेताहरुले संघियता आन्दोलन विना आउन नसक्ने निष्कर्षमा आफुहरु पुगीसकेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका युवा नेता तथा सभासद अभिषेक प्रताप शाहले काग्रेस एमालेले संख्याको मातमा मधेश आन्दोलन लगायतको क्रममा भएको सहमतीलाई उल्टाउन खाजेको आरोप लगाए । शाहले भने, विगतमा जे जती सहमती भएको छ, त्यो कार्यन्वयन गर्न पनि आन्द्योलनको विकल्प छैन ।
तमलोपाले मनायो ७ औ बार्षीकोत्सव
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आईतवार आफनो स्थापनाको दिवसको अवसरमा ७ औ बार्षीत्वसत्व मनाएको छ । बार्षीकोत्सवको अवसर तमलोपाले आईतवार दिउसो काठमाडौको डिल्लीवजारमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा उपाष्टपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु, पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरु, नेपाल स्थित विदेशी कुटनितिज्ञहरु लगायतका उपस्थिती थियो । तमलोपाको चियापानमा पुगेका प्रमुख पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरुले भने पुरानै कुराहरु पत्रकारहरु माझ दोह्याएका थिए ।
मोर्चाका नेतृत्वहरुले उपेन्द्र यादवलाई भने - नचाहिने कुरा नबोल्नुस
at 6:10 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा मधेशी मोर्चामा आफना प्रतिनिधी पठाए पनि मोर्चाको तीव्र आलोचना गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अन्य नेतृत्वहरुले भनेका छन, नचाहिने कुरा वाहिर नबोल्नुस ।
गएको सोमवार तमलोपाको संसदीय दलको कार्यलयमा बसेको मोर्चाको बैठकमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले फोरम नेपालका प्रतिनिधीहरु लालबाबु राउत र राम सहाय यादवलाई भने, तपाई मार्फत हामी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विशेष अनुरोध गर्छौ, मोर्चा र मोर्चाका अन्य नेतृत्वहरुको वारेमा नचाहिने टिपिण्णी नहोस । महतो र गच्छदारले फोरम नेपालका प्रतिनिधिहरु सम्बोधन गर्दै भने, तपाईहरु गएर आफना अध्यक्षज्यू लाई भन्नुस कि मोर्चाको बैठकमा आएर जे असन्तुष्टि छ, त्यो व्यक्त गर्न ।
झापा, मोरड, सुनसरी जिल्लाका लागी संघर्ष समिती गठन
at 8:21 AM Posted by Dalan
पुर्वका झापा, सुनसरी र मोरड जिल्लालाई मधेश प्रदेश भित्रै राख्नु पर्ने माग सहित मधेशी दलहरुमा त्यस क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले संघर्ष समितीको घोषणा गरेका छन । आईतवार विराटनगरमा भेला गरेर घोषणा गरिएको संघर्ष समितीले पुर्वका झापा, मोरड र सुनसरीमा अहिले देखि नै त्यसका लागी विभिन्ने खाले कार्यक्रमहरु समेत गर्ने जनाएका छन ।
सदभावना पार्टीका केन्द्रिय प्रवक्ता संतोष मेहताको पहलमा केही दिन अगाडी देखि नै छलफलमा रहेको यो अभियानमा सबै मधेशी पार्टीहरुको प्रतिनिधिहरु सहभागी छन । सदभावना पार्टीका मेहता सहित फोरम नेपालका मृत्युन्जय झा, फोरम लोकतान्त्रिकका दिलीप धाडेवा लगायतका नेताहरु संघर्ष समितीमा सहभागी छन । संघर्ष समितीमा तीनै जिल्लाका मधेशी पार्टीहरुको अध्यक्षहरु समेत सहभागी छन ।
स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागी मात्रिका यादवले जनकपुरमा भेला गर्ने
स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागी आन्दोलनको आवश्यकता रहेको भन्दै मात्रिका यादवले आउदो २ र ३ पुषमा जनकपुरमा त्यसको अवधाणा वारे भेलाको आयोजना गर्दै छन । भेलाले स्वायत मधेश प्रदेशको अवधारणा तयार पार्नुको साथै आन्द्योलनलाई कसरी अगाडी वढाउने वारेमा विस्तृत छलफल गरिने तयारी गरिएको छ । उक्त भेलाले मधेश प्रदेशका आन्दोलनको खाका तयार पारेपछि जनजाती अगुवा पदमरत्न तुलाधर संग मोर्चाको घोषणा गरिने कार्यक्रम छ । भेलामा मात्रिका यादव संगै गोपाल ठाकुर, भरत साह, धनश्याम यादव लगायतका व्यक्तिहरुको विशेष सहभागीता रहने छ ।
मात्रिका भन्छन, आन्दोलन विना स्वायत्त मधेश प्रदेश आउने सम्भावना हामी देख्दैनौ । यादवका अनुसार मधेश आन्दोलन विदेशीहरु दबाब र कम्युनिष्टहरुको अन्धराष्टवादका कारण कमजोर भएर आजको स्थितीमा आईसकेको छ । यादव भन्छन, यसलाई नया शिरावाट उचाईमा लग्नुको विकल्प छैन ।
ओली र मधेशी मोर्चा विच आज पनि छलफल - उपेन्द्र यादव द्धारा वहिष्कार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विच शनिवार विहान फेरी छलफल भएको छ । पछिल्लो केही समय यता ओली र मधेशी मोर्चा विच लागातार बैठकहरु भईरहेको छ । ८ माघ नजिकिदै जादा ओली र मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विचको छलफललाई अर्थपुर्ण रुपमा लिन थालिएको छ । ओली निवास वालकोटमा शनिवार भएको छलफलमा मधेशी मोर्चाको तर्फवाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहभागी थिए भने एमालेको तर्फवाट अध्यक्ष ओली संगै नेताहरु माधव नेपाल पनि सहभागी थिए । आजको छलफलमा मोर्चाका घटक फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाईएको थियो तर यादव छलफलमा सहभागी भएन ।
छलफलमा सहभागी नेताहरुका अनुसार आज पनि कुनै खासै ठोस परिणाम चाही निस्केन । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, आज फेरी एमालेले आफनो पुरौ सात प्रदेशमा सहमती जनाउन हामीलाई आग्रह गर्यो, हामीले त्यसलाई मान्न सकिन्न भनेर आयौ । महतोका अनुसार छलफलमा सहभागी तीनै शिर्ष मधेशी नेताहरुले झापा, मोरड, सुनसरी, चितवन, कैलाली र कन्चनपुरलाई मधेशमै राख्नु पर्ने आफनो पुर्ववत अडान राखेका थिए ।
असमावेशी नियुक्तिको विरुद्धमा मधेशी प्राध्यापकद्धारा त्रिवीमा तालावन्दी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगतको सम्झौता विपरित हालै गरेको विभिन्न नियुक्तीहरु समावेशी नभएको भन्दै लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन ।
गएको आइतवार लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष उदय किशोर तिवारीको नेतृत्वमा गरिएको तालावन्दी त्रिवीले आफनो निर्णय नसध्याए सम्म जारी रहने संघले जनाएको छ । ०६८ सालमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा त्रिवी पदाधिकारी र संघ विच भएको सम्झौता अनुसार त्रिवीले गर्ने हरेक नियुक्तीहरु समावेशी हुनु पर्ने हो, संघका अध्यक्ष तिवारीले भने, तर हालै त्रिवीले गरेको महत्वपुर्ण निर्यायहरुमा मधेशी, दलीत, जनजातीहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । त्रिवीले हालै डिन लगायतका केही महत्वपुर्ण नियुक्तीहरु गरेका थिए । संघका अनुसार नव नियुक्तहरु पुरै काग्रेस, एमाले र एमाओवादीको भागवण्डावाट भएको थियो ।
पदमरत्न तुलाधर र मधेशी/जनजाती विच मोर्चा घोषणाको तयारी
जनजाती अगुवा पदम रत्न तुलाधर र मधेशी नेताहरु र जनजाती विच मोर्चा घोषणाको तयारी तीव्र रुपमा भईरहेको त्यससंग आवद्ध अगुवाहरु भन्छन । गएको १७ गते राजधानीमा भएको तुलाधर र मधेशी तथा जनजातीहरु विचको छलफलले पुषको पहिलो साता सम्म त्यस्तो मोर्चाको घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस बैठकमा आदिवासी जनजाति नेताहरु पद्मरत्न तुलाधार, शुरेष आलेमगर, परशुराम तामाङ, खगेन्द्र माखिम, शान्ति जिरेल, पासाङ सेर्पा, अमरध्वज लामा तामाङ, निरज गोले, मल्ल के सुन्दर सहभागी थिए । यसरी नै मधेशको तर्फवाट मातृका यादव, देवेश झा , देवेन्द्र यादव, घनश्याम यादव, भरतप्रसाद शाह, शिवराम यादव, जयप्रकाश यादव, गोपाल ठाकुर, सुजन, डा। राम केवल शाह र महेन्द्र पासवान सहभागी थिए ।
मधेशी मोर्चाले औपचारिक रुपमै भन्यो - संविद्यान नबने सम्म सरकारमा जान्नौ
छ ओटा प्रमुख मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको आईतवार बसेको बैठकले औपचारिक रुपमै निर्णय गर्दै भनेका छन, ‘नयां संविद्यान नबने सम्म कुनै पनि वाहानामा सरकारमा सामेल हुने छैनौ ।’
आईतवार सिंहदरवार स्थित फोरम लोकतान्त्रिकको संसदीय दलको कार्यलयमा भएको मोर्चाको बैठकले मोर्चाको अवधारण तथा कार्यसंचालन पद्धती समेत बनाएको छ । यस अघि बसेको मोर्चाको बैठकले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर उनीहरुलाई अवधारणा तथा कार्यसंचालन पद्धती बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । आज बसेको मोर्चाको बैठकले पारित गरेको अवधारणाको सुरु मै संविद्यान नबने सम्म सरकारमा सहभागी नहुने कुरा प्रष्टाईएको छ । मोर्चाले भनेको छ, पहिचान सहित संघियता र संघियता सहितको संविद्यानका लागी मोर्चाले दबाब समेत सिर्जना गर्ने छ ।
मोर्चाले यस अघि नै संवाद समितीमा बुझाई सकेको अवधारण अनुरुप राज्य पुर्नर्संरचना आयोगको रिर्पोट बमोजिमको संघीयताको पक्षमा उभिने जनाएको छ । मोर्चाको एक घटक फोरम नेपालले संवाद समितीमा छुटै एक मधेश एक प्रदेशको अवधारणा पस्तुत गरेपछि फोरम नेपाल प्रति मोर्चाका अन्य घटक सशंकित भएका थिए । राज्य पुर्नसंरचना आयोगको रिर्पोटमा मधेशमा दुई प्रदेशको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ ।
उपेन्द्र यादवको रणनितीक प्रयोगमा ‘मधेशी मोर्चा’
मधेशी मोर्चालाई पुर्न व्युताउने निर्णय भएकै हप्ता सिंहदरवार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यलयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मोर्चाका छ ओटै अध्यक्षहरुको बैठक भयो । ओलीले राष्टिय सहमतीको सरकारका लागी मधेशी पार्टीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने वारे छलफल गरे ।
उक्त छलफलकै भोली पल्ट संवाद समितीको बैठकमा उपेन्द्र यादवले फोरम नेपालको तर्फवाट विवादित मुद्धाहरुमा छुटै अवधारणा प्रस्तुत गरे । दुई दिन अगाडी मात्रै मोर्चा व्युताउने बैठकमा यादवले संयुक्त रुपमा सबै काम गर्ने बताएका थिए । तर यादवले संवाद समितीमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पछि वाकी पांच ओटा मधेशी अध्यक्षहरु तीनछक परे ।
संघीयता सहितको विवादित मुद्धा वारे मधेशी मोर्चाले अवधारणा सार्वजनिक गर्ने
at 2:42 AM Posted by Dalan
केही दिन अघि मात्रै पुर्नजिवित भएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संघियता सहितको विवादित मुद्धाहरुमा आफनो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन ।
पुर्नजिवित भए संगै संविद्यान नबने सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गरेको ६ ओटा मधेशी पार्टीहरु सम्मलीत मोर्चाले मोर्चाको अवधारणा र कार्यसंचालन पद्धति वारे काम गर्न एउटा समिती नै बनाएको थियो । गएको ८ गते भएको मोर्चाको बैठकले लक्ष्मण लाल कर्ण, लालबाबु राउत, जितेन्द्र देव, हृदेश त्रिपाठी, रानी तिवारी, शेखर सिंह सम्मलीत ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलको बुधवार भएको बैठकले मोर्चाको अवधारणालाई अन्तिम रुप दिईसकेको त्यसमा सहभागी नेताहरुले बताए ।
मधेशमा नयां शक्तिको चुनौति
मधेशमा नयां शक्तिको खोजी
at 6:08 AM Posted by Dalan
दोस्रो संविद्यानसभाले हालै आफनो एक बर्ष पुरा गरेको छ । पहिलो संविद्यानसभा वाट काठमाडौको सत्तामा पहुच बनाएको मधेशी राजनितीले दोस्रो संविद्यानसभामा लज्जाजनक हार व्योहोरनु पर्यो । यद्यपी सबै मधेशी पार्टीहरुको मत प्रतिशत पहिलो संविद्यानसभा भन्दा अली वढी नै देखिन्छ दोस्रो संविद्यानसभामा । यसले मधेशी मनोविज्ञान कमजोर नभएको वरु थप वढदै गईरहेको प्रष्ट हुन्छ । तर पनि मधेशी पार्टीहरुको कन्त विजोगका कारण मधेशको मुद्धामा अहिले पुर्ण रुपमा ओझेलमा परेको देखिन्छ । किनकी प्रमुख भनाउने पार्टीहरु त्यसलाई अत्मसाथ गरेको देखिदैनन ।
दोस्रो संविद्यानसभामा मधेशी पार्टीहरुले हार व्योहोरे संगै मधेशमा एक किसिमको निराशको वातावरण देखियो । पछि मधेशी पार्टीहरुले समानुपातिक सभासदको छनौटमा गरेको व्यापार प्रर्दशनले मधेशी नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश पैदा गर्यो र विगतको ५ बर्षमा सरकारमा रहेर गरेको घृणित खेलले सम्पुर्ण मधेशी नेतृत्वहरुको राजनितीक हैसियत माथी मधेशका दुरदराजका गाउलेहरुले प्रश्न गर्न थाले । यी र यस्तै सन्दर्भमा मधेशको राजनितीक मनोविज्ञानमा सुरु भयो् अब मधेशमा नयां शक्तिको विकल्प छैन भनेर ।
विहिवार जनकपुरको सबै भन्दा ठुलो मेला विवाह पन्चमी भए पनि जनकपुरमा खासै त्यसको रौनक देखिएको छैन । विवाहपन्चमी को अवसरमा हरेक पांच बर्षमा भारतको अयोध्यावाट आउने विशेष जयन्ती पनि आज अपरान्ह जनकपुर आईपुगेका छन । यो भन्दा पहिला पहिला जयन्ती आउदा दिन देखि नै जनकपुरको त्यसको भव्य स्वागत देखि नाचगान हुन्थ्यो । तर आज त्यस्तो केहि देखिदैनन उद्योग वाणिज्य संघ धनषाका सभापति तथा मोदीको जनकपुर स्वागत समितीका सदस्य शिवशंकर साह भन्छन, जनकपुर अहिले स्तब्ध छ, एक प्रकारको शोकमा छ । यद्यपी हामी विवाहपन्चमीको तयारीमा छौ । साहका अनुसार मोदीको जनकपुर भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगीत भएपछि त्यसको प्रभाव विवाहपन्चमीमा पर्ने लगभग निश्चित छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आईतवार विहानै टिविटर मार्फत मोदी सार्कको क्रममा नेपाल जादा जनकपुर, लुम्बिनी र मुस्ताड गर्ने भनिएको भ्रमण नहुने बताएका थिए ।
गएको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौ आउदा संविद्यानसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वयंम आफैले जनकपुर आउने घोषणा गरेपछि जनकपुर उत्साहित भएका थिए । मोदीले सार्कको क्रममा आफु जनकपुर र लुम्बिनी आउने बताएका थिए । सार्क सम्मेलन आउदो बुधवार र विहिवार काठमाडौमा हुदै छ । त्यसलाई लक्षित गरेर जनकपुरमा मोदीको स्वागतको तयारी दशैकै सेरोफेरो देखि सुरु गरिएको थियो । काठमाडौवाट भारतीय दुतावासका अधिकारीहरु समेत आएर मोदीको जनकपुर भ्रमणवारे छलफल गरेपछि जनकपुरका अधिकारीहरु थप हौसिएका थिए ।
मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्ध नभएको सरकारको भनाई
मंसीरमा ९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गर्ने भनिएको जनकपुर भ्रमण रद्ध नभएको सरकारका मन्त्री तथा अन्य अधिकारीहरुले बताएका छन । विहिवार सरकारका एक जना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्ध भएको जनाएको थियो । निधिलाई सरकारले जनकपुरमा मोदीको स्वागत गर्न जिम्मा समेत दिएका छन ।
तर आज पत्रकार सम्मेलन गरेर परराष्टमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्ध भएको जानकारी आफुलाई नभएको बताए । मन्त्रालयले सार्क सम्मेलनको तयारीका लागी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले भने, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणवारेमा मन्त्री निधिीले निकाले प्रेस विज्ञप्तिवारे समेत आफु र सरकारलाई कुनै अधिकारीक जानकारी नरहेको जनाए । यस अघि आज विहान मात्रै गृहसचिव सुर्य सिलवाले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मोदीको जनकपुर भ्रमण स्थगीत भएको वारे आफुहरुलाई पनि कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए । सिलवालले मोदीको सार्वजनिक अभिनन्दका लागी आज देखि आफ हरु बाह्विद्यामा तयारी थालेको समेत जनाएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्ध
at 9:11 PM Posted by Dalan
सार्कमा भाग लिन आउदा जनकपुर भएर आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यक्रम रद्ध भएको नेपाल सरकारका मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताएका छन । निधिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफुलाई भारतीय राजदुतावासले मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्ध भएको जानकारी गराएको जनाएको छ । मोदी ९ मंसीरमा जनकपुर हुदै काठमाडौ आउने कार्यक्रम थियो ।
निधिले जारी गरेको प्रेस विज्ञिप्तिमा वुधवार मात्रै एमाओवादी तथा मधेशी पार्टीहरुले मोदीले बाह्विद्यामा सम्बोधन गर्न पाउनु पर्ने मागका लागी गरेको प्रर्दशनलाई आलोचना गरिएको छ । निधिले भनेको छ, एकिकृत माओवादीको नेतृत्वमा केही मधेशी पार्टीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उग्र नारावाजी गरेर समानान्नतर मंच बनाउने र सुरक्षा घेरा नमान्ने चेतावनी दिएको तथा कुटनितिक मर्यादा विपरित विरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दुतावासमामा ज्ञापन पत्र दिएर गैर जिम्मेवार काम गरेको प्रति म घोर आपति जनाउन चाहन्छू ।
पछिल्लो समयमा जनकपुरमा मोदीको सम्बोधनलाई लिएर विवाद चल्दै आएको थियो । सरकारले तयारीको जिम्माको लगाएका मन्त्री निधीले जानकी मन्दिरमै सम्बोधन गराउन तयारी गरेपछि जनकपुरमा काग्रेस वाहेकका अन्य दलहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएको थियो । एमाओवादी सहित मधेशी पार्टीहरुले वाह्विद्यामा मोदीको सम्बोधन हुनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन नै गर्दै आएका थिए ।
मोदीको जनकपुर भ्रमण - सम्बन्धको नयां आयाम
मंसीर ९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउने भएपछि त्यसको विभिन्न दृष्टिकोण विश्लेषणहरु गरिरहेको पाईन्छ । भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री आउने भएपछि जनकपुरमा पनि त्यसको तयारी जोडतोडका साथ भईरहेको देखिन्छ ।
जनकपुर स्थित वरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र विमल मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई नेपाल भारतको सम्बन्धकै नयां आयामको संज्ञा दिए । विमल भन्छन, यसलाई समान्य रुपमा विश्लेषण गर्नु हुदैन । विमलका अनुसार नेपालमा दुई ओटा सभ्यता सबै भन्दा मजवुत छन, एउटा जनकपुरको सभ्यता अर्को लुम्बिनीको सभ्यता, यी दुवै ठाउमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैले इच्छाएर आउनुलाई सम्बन्धको एउटा नया युगको सुरुवातको रुपमा लिनु पर्छ । मैथिल साहित्यको मुर्धन्य जानकार समेत रहेका विमल नेपाल भारतको समाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार मिथिला अवद्यको सम्बन्ध भएको बताए । समयले यी दुवै भुभागलाई सिमाले दुई देशमा विभाजन गरे पनि समाजिक परम्परा र संस्कृतिक वैभवता अझै पनि समान छ , विमल भन्छन, याहा निर एउटा विश्वकै शक्तिशाली तथा सबै भन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देशका प्रधानमन्त्री आउनुलाई चानचुने ठान्नु हुदैन ।
अमरेश सिंह भन्छन- ७ प्रदेशका लागी मैलै हस्ताक्षर गरेकै होइन, सहमतीका लागी मात्रै गरेको छू
नेपाली काग्रेसका सभासद अमरेश कुमार सिंहले आज संवाद समितीमा पार्टीले बुझाएको हस्ताक्षरमा आफुले सहमतीको लागी मात्रै हस्ताक्षर गरेको बताए । सिंहले दलान संग कुरा गर्दै भने, पार्टी नेतृत्वले सबैको सहमतीमै संघियता आउने बताए पछि मात्रै आफुले हस्ताक्षर गरेको जनाए । उनले भने, तर संवाद समितीमा हाम्रो उपसभापतिले प्रक्रियाको कुरा गर्नु भयो, म त्यो सुने वितिकै आफनो हाथले छुटै चिठी लेखेर संवाद समितीको सभापति बाबुराम भटराई लाई दिएको छू, मेरो हस्ताक्षर सहमतीको लागी हो, प्रक्रियाको लागी होईन, ७ प्रदेशका लागी होईन ।
काग्रेस एमालेले आज बसेको संवाद समितीमा ४३ जनाको सभासदको हस्ताक्षर ७ प्रदेशको पक्षमा बुझाएको छ । सिंहले सुरु देखि ७ प्रदेशको विरुद्धमा उभिदै आएका छन । सिंह सहित ३३ जना काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले अहिले सम्म पार्टी सभापतिलाई त्यस विरुद्ध हस्ताक्षर बुझाई सकेका छन ।
७ प्रदेशको विरुद्धमा पदम रत्न तुलाधर संगै मधेशी वुद्धजिवीहरु आन्दोलन गर्ने
नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले अघि सारेको ७ प्रदेशको खाका विरुद्ध जनजाती अगुवा पदम रत्न तुलाधर संगै मधेशी वुद्धजिवीहरु पनि आन्द्योलनमा होमिने निष्कर्ष निकालेका छन । सोमवार काठमाडौमा तुलाधर र मधेशका बुद्धजिवीहरु विच भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छलफलमा सहभागी अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताए ।
महतोले भने, हामी अब आन्दोलनको विकल्प देख्दैनौ, काग्रेस, एमालेले मधेशलाई पुरै मरुभुमि बनाउने खालको प्रस्ताव ल्याएको छ, वार्ता ट्ेवलमा टसमस भइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको् विकल्प नरहेको हाम्रो निष्कर्ष हो । जनजाती अगुवा तुलाधरले यस अघि नै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
काठमाडौमा आज भएको छलफलमा जनजाती अगुवा तुलाधर संग मधेशका बुद्धजिवीहरु सुरेन्द्र महतो, जय निशान्त, सुनिल रन्जन सिंह लगायतका एक दर्जन जती सहभागी थिए ।
मोदीको जनकपुर भ्रमणवाट मधेशको के के अपेक्षा ?
संतोष मेहता - प्रवक्ता, सदभावना पार्टी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व मन्चमा शक्तिशाली रुपमा प्रस्तुत भएको नेता हुनुहुन्छ । मुख्यगरी मोदी विश्व मन्चमा पुर्वीय सभ्यताकै नेतृत्व गरेर अगाडी वढदै हुनुहुन्छ । यस परिपेक्ष्यमा भारतको असल छिमेकिको हैसियतमा हामी उहा प्रति गर्व नै गर्नु पर्छ । जहा सम्म सार्क सम्मेलनको क्रममा उहा मधेशको केन्द्र मानिने जनकपुर आउदा स्वभाविक रुपमा मधेशीहरु उत्साहित हुन्छ । साथै उहावाट अपेक्षा पनि राख्नु अस्वभाविक होईन । नेपालको राजनितीमा प्रभाव राख्ने एउटा छिमेकिका प्रधानमन्त्री जो विश्वमै आफनो नेतृत्वको झण्डा फहराउन चाहिरहेका छन, उहा जस्ता व्यक्तित्ववाट स्वभाविक रुपममा हामी मधेशीहरु मुख्य गरी दुई ओटा कुरामा वढी अपेक्षा राख्छौ । एउटा नेपालका शासकहरु वाट हामी पिडतहरु आफनो अधिकारका लागी मधेश राजनिती गरिरहेका छौ, त्यसप्रति उहाको उच्च सदभाव र दोस्रो मधेशको सम्रग विकासमा भारतको अग्रसरता ।
जय निशान्त - बुद्धजिवी - कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल डेमेक्रेटिक फाउन्डेसन -
नरेन्द्र मोदी सार्कमा सहभागी हुने बेलामा जनकपुर र लुम्बिनी जाने इच्छा आफैले व्यक्त गर्नु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विश्व मंचमै आफनो जर्वदस्त प्रभाव प्रमाणित गर्न अगाडी वढीसकेका नेताको रुपमा देखिन्छ । जो हालैका दिनमा अमेरिका पुग्दा पनि भारतीयहरु मझ सार्वजनिक सम्बोधन गरेका छन । नेपालमा हाल उनको जनकपुर सम्बोधनलाई लिएर खासगरी वामवन्थीहरुमा देखिएको संकिर्णता खेदजनक छ । उनका् सम्बोधनलाई अनावश्यक विवादमा तान्नुले ती कथित वामपन्थीहरुको सोचस्तर पनि दर्शौउछ । र एउटा कुरा के बुझनु आवश्यक छ भने, विश्व मन्चमै शक्तिशाली बन्ने नेता जनकपुरमा आएर मधेशलाई भडकाउने होईन वरु नेपालको राष्टियता थप मिलाउने काम गर्छ । मोदीको सरकार आए संगै नेपालको सम्बन्धमा एउटा गतिशिलता देखिएको छ, जसवाट सम्रग नेपालले फाईदा लिन सक्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मधेशले पनि आफनो अपेक्षाहरु राख्छन ।
मोदी भ्रमण - जनकपुरमा सुरक्षा चुनौती नभएको स्थानिय अधिकारीको भनाई
at 1:26 AM Posted by Dalan
सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंसीर ९ मा जनकपुर हुदै काठमाडौ आउने भए पछि त्यसको सुरक्षा लगायतको वारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भईरहेको देखिन्छ । तर जनकपुरका स्थानिय सुरक्षा अधिकारीहरुले मोदीको जनकपुर भ्रमणको लागी सुरक्षा चुनौती नभएको बताए । धनुषाका प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर थापाले भने, सुरक्षा अवस्थामा पुर्ण रुपमा दुरुस्त छ, वाहिर कसले ले भन्यो त्यो मलाई थाहा भएन तर याहा सबै कुरा ठिक छ । थापाले आफुहरु अहिले सम्म मोदीको भ्रमणको अधिकारिक कार्यतालिका नपाएको बताए । उनले भने, हामी औपचारिक कार्यतालिकाको पर्खाइमा छौ, त्यस अनुसार हामी गर्नु पर्ने थप कामहरु गर्छौ ।
मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारीकै सिलसिलामा भारतीय राजदुत रन्जित रे आफु दुई साता अघि जनकपुर पुगेर सरोकार वालाहरु संग वृहत छलफल गरेका थिए । त्यसयता दुतावासका अधिकारीहरु लागातार जनकपुरमा मोदीको भ्रमण तयारीमा जुटेका छन । भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरु समेत जनकपुरका स्थानिय सुरक्षा अधिकारीहरु संग मिलेर तयारीमा जुटीरहेको छ ।
यद्यपी मोदीले जनकपुर घोषणा गर्ने विकास परियोजनाहरुको अहिले सम्म अन्तिम टुगों लागी सकेको छैन । भारतीय दुतावासका प्रवक्ता अभय कुमारले भने, हामी त्यसको अन्तिम तयारीमा लागीरहेका छौ, यो हप्ताको अन्त सम्ममा हामी टुगों लगाउदै छौ । उनका अनुसार मोदी जनकपुर आउने रुट देखि जनकपुरमा गरिने नागरिक सम्बोधन देखि जनकपुर केन्द्रित गरिने विकास परियोजनाको वारेमा दुतावास अन्तिम चरणको कामहरु गर्दै छन ।
नयां संविद्यान नबने सम्म मधेशी पार्टी सरकारमा नजाने
मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकले नयां संविद्यान जारी नहुन्जेल सम्म सरकारमा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवार स्थित मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको संसदीय दलको कार्यलयमा आज भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए । साथै बैठकले सबै मधेशी पार्टीहरु समाहित गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुर्नगठन पनि गरिने सहमती मधेशी पार्टीहरु विच भएको छ ।
आजको बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राष्टिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरुको उपस्थिती थियो । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले भने, यो मधेशी पार्टीहरुको मोर्चाले एमाओवादी सम्मलीत संघीय मोर्चालाई थप मजबुत बनाउने उदेश्यका साथ काम गर्ने छौं । महतोका अनुसार मधेशको मुद्धाहरु विना संघर्ष उपलब्धी नहुने भएकाले सडक र सदनमा संघर्षका लागी यो मोर्चा पुर्नगठन गरिएको छ । उनले भने, यसमा अनिल झा देखि राज किशोर यादव लगायत सबै मधेशी पार्टीहरु सहभागी हुने अनौपचारिक सहमती भईसकेको छ ।
मधेशको मुद्धा सम्बोधन नहुन्जेल सरकारमा जान्नौ - तमलोपा
at 4:53 AM Posted by Dalan
केही दिन यता संचारमाध्यमहरुमा तमलोपा सरकारमा सहभागी हुदै भन्ने आईरहेको समाचार प्रति तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आपति जनाएको छ । तमलोपाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, नयां संविद्यान मार्फत मधेशको मुद्धा सम्बोधन नहुन्जेल हामी सरकारमा नजाने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौ ।
तमलोपाले विज्ञप्ति मार्फत संचार माध्यममा आएको समाचारलाई मधेशलाई वदनाम गराउने उदेश्यका साथ सुनियोजित प्रोपगाण्डा भनेको छ । पछिल्लो केही दिन यता संचार माध्यमहरुले तमलोपा लगायतका केही मधेशी पार्टी वर्तमान सरकारमा हुन हुन लागेको आशय सहितको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशन गदैृ आएका थिए ।
झापा, मोरड, सुनसरीका लागी मधेशी नेताहरुको स्थानिय संघर्ष समिती बन्दै
at 6:32 AM Posted by Dalan
नेपाली काग्रेस र एमालेले ल्याएको सात प्रदेशको खाकामा झापा, मोरड, सुनसरीलाई पहाडमा गाभेको भन्दै त्यहा वाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी नेताहरु त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न संघर्ष समिती बनाउन लागेका छन । अर्को साता विराटनगरमा भेलाको आयोजना गरेर त्यस्तो संघर्ष समितीको घोषणा हुने नेताहरु बताए ।
यस्तो अभियान चलाउनेमा झापा, मोरड, सुनसरीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी पार्टीका केन्द्रिय देखि स्थानिय नेताहरु छन । यो अभियानका अगुवाई गरीरहेको सदभावना पार्टीका केन्द्रिय प्रवक्ता संतोष मेहताका अनुसार विराटनगर भेला गरेर काग्रेस एमाले विरुद्ध स्थानिय स्तरमा संघर्ष गर्ने उदेश्यका साथ संघर्ष समितीको घोषणा हुने छ । यो अभियानमा सदभावनाका मेहता संगै विराटनगरका फोरम नेपालका अगुवा नेता जयराम यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका भीम राजवंशी, झापाका संतोष गणेश लगायतका छन ।
काग्रेसकै मधेशी सभासदहरुले भने - सात प्रदेशको खाका अमान्य
नेपाली काग्रेसका तर्फवाट तराई मधेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले पार्टीले अघि सारेको सात प्रदेशको विरोध गर्दै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालालाई आज विहान हस्ताक्षर बुझाएको छ । काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले उत्तर दक्षिणको खाकाको समेत विरोध गर्दै भनेका छन, चुरे भन्दा तल दक्षिण सिमा सम्मको तीन प्रदेशमा पार्टी जानु पनु पर्छ । काग्रेसका मधेशी सभासदहरुले भनेका छन, पुर्वी, मध्य र पश्चिम गरी तीन मधेश प्रदेश बनाउनु पर्छ ।
आज बिहान काग्रेसका २२ जना मधेशी सभासदको हस्ताक्षर बुझाइएको काग्रेसका सभासद तेजूलाल चौधरीले बताए । अरु सभासदहरु जिल्ला तिर छ, हस्ताक्षर संकलन जारी रहेको र बाकी हस्ताक्षर भोली बेलुकी सम्म हामीले बुझाउने तयारी गरिरहेको चौधरीले बताए । चौधरी सप्तरीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने काग्रेसका सभासद हुन । र्फमुला मन्सुरको नेतृत्वमा हिजो देखि थालिएको यो अभियानले पार्टीले अघि सारेको सात प्रदेशको अवधारण पार्टीको राष्टिय अधिवेशनको निर्णय विपरित समेत रहेको जिकिर गरेका छन ।
जेपी गुप्ता भन्छन - मधेशको सवालमा अब भारत संग ठोस रुपमा कुरा गर्नु पर्छ
जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेश राष्टिय अभियानले भनेको छ, अब मधेशका राजनितीक शक्तिहरु आफनो अधिकारको सवालमा अडिग रहेर भारत सरकार संग कुरा गर्नु पर्दछ । रौतहटको गरुडामा हिजो देखि सुरु भएको दोस्रो राष्टिय परिषदको बैठकले जारी गरेको अभियानको गरुडा घोषणा पत्रमा भनिएको छ, नेपाली सता जहिले पनि मधेशको यथोचित मागहरुलाई दबाउन भारतसंग लेनदेनको बिषय बनाएर मधेशलाई बदनाम पार्न खोज्छ । भारत पनि आफनो स्वार्थका लागी अन्देखा जस्तो गरेर अघि वढछ र मधेशको आन्दोलनलाई हतोतसाहित गर्ने गर्छन, अभियानको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
अभियानको ६ पेज लामो घोषणा पत्रको तेस्रो पजको क्षेत्रिय भु राजनितीक स्वार्थमा नेपाल शिर्षकमा भनिएको छ, नेपालमा चिन र भारतको सक्रियता तीव्र हुदै गईरहेको बेला मधेशीहरु सचेत भएर अघि वढनु पर्छ ।
काग्रेस एमाले विरुद्ध आन्दोलन गर्ने छौ - जेपी गुप्ता
तराई मधेश राष्टिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले काग्रेस एमालेले ल्याएको संघियता समबन्धी सात प्रदेशको अवधारण कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताएका छन । आज रौतहटको गरुडामा अभियानको दोस्रो राष्टिय परिषदको बैठक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गुप्ताले काग्रेस एमालेको अवधारणा कुनै पनि हालतमा लागु हुन नदिने चेतावनी दिए ।
गुप्ताले संघियताको विरुद्धमा काग्रेस एमाले सहितका प्रमुख दलहरु चलखेल गरिरहेको बताउदै विना आन्दोलनले संघियता नआउने बताए । उनले भने, हामी आन्दोलनमै छौ, मधेश आन्दोलनको माग बमोजिम संघियता नआए सम्म, हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।
तमलोपा भित्र तीव्र असन्तुष्टि
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी भित्र नेतृत्व प्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । आज तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई १३ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै पार्टी भित्रको वेथिती मिलाउन चेतावनी दिएको छ ।
दोस्रो संविद्यानसभाको चुनावमा नराम्ररी पराजित भए संगै तमलोपा भित्र विवाद चुलिदै आएको छ । मुख्यगरी पार्टी नेतृत्वले समानुपातिकमा सभासद छान्दा पार्टी प्रति समर्पीत भन्दा पनि लेनदेनको आधारमा छनौट गरेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरको तीव्र आलोचना हुदै आएको छ । तमलोपाको समानुपातिक कोटामा अध्यक्ष ठाकुरले आफनो सम्धनी इन्द्रा झा लाई सभासद बनाए पछि उनको ईमान्द्यारिता माथी नै खुल्ला रुपमै तमलोपाकै नेताहरु प्रश्न उठाउन थालेका छन ।
एमाओवादीसँगको सहकार्यप्रति मधेसवादीभित्रै विवाद
at 6:14 AM Posted by Dalan
एकीकृत नेकपा माओवादीसँगको सहकार्यलाई लिएर मधेसवादी दलहरूभित्रै गम्भीर विवाद सुुरु भएको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णयविनै संविधान बन्न नदिने एमाओवादी योजनामा फसेर सहकार्य गरिएको भन्दै सबै मधेसवादी दलभित्र विवाद देखिएको हो ।
एमाओवादीसँगको सहकार्यलाई लिएर मधेसवादी दलका केही नेताले नेतृत्वको चर्काे आलोचना गरेका छन् । एमाओवादीको मुद्दामा मधेसी दलहरू फसेको र मधेसको एजेन्डालाई बिर्सेको उनीहरूको आरोप छ । मधेसवादी दलको नेतृत्व मधेसको मुद्दामा अडिन नसकी एमाओवादीको मुद्दामा पछि लागेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘एमाओवादीसँग सहकार्य गरिरहेका मधेसी दलहरूको अडान के हो ? त्यो प्रस्ट हुन सकेको छैन ।
मोदीको स्वागतमा जनकपुर जुटदै
सार्क सम्मेलनको बेला हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको लागी जनकपुरमा तयारी सुरु भइसकेको छ । गएको साउन १८र१९ मा मोदी नेपाल आएको वेला उनी स्वयंमले सार्क सम्मेलनको वेला आफु आउदा जनकपुर र लुम्बिनी जाने घोषणा गरेका थिए ।
आउदो मंसीर १० र ११ मा हुन गईरहेको सार्क सम्मेलन हुदै छ । अहिले सम्म औपचारिक रुपमा अन्तिम रुप दिईनसकेको उनको भ्रमण कार्यतालिकाको वावजुद अधिकारीहरु त्यसको तयारीमा जुटी सकेको छ । जनकपुरमा मोदी मुख्य रुपमा जानकी मन्दिरमा पुजापाठ गर्ने छ भने जानकी मन्दिरवाटै जनकपुरवासीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै उनी जनकपुर विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु संग सानो अन्र्तक्रिया पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारहरु बताउछन ।
जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दासका अनुसार मोदीका लागी जानकी मन्दिरमा विशेष पुजाको व्यवस्थामा मन्दिर लागी सकेको छ । दासका अनुसार मोदीले जानकी मन्दिरमा विशेष धुप द्धिप पुजा र विशेष आरती गर्ने छ । मोदी जानकी मन्दिरमा आउदा त्याहा व्राह्मणहरु वेद उच्चारणको गर्नुको साथै स्वस्तीक वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको दासले बताए । मोदी जानकी मन्दिरकै प्रारडणमा रहेको जनक मन्दिर र विवाह मण्डपमा पनि पुगेर पुजा गर्ने छ । जानकी मन्दिरको तर्फवाट मोदीलाई उपहार समेत दिने योजना छ ।
जनकपुरमा लाग्ने भव्य मेला विवाह पन्चमी पनि यस बर्ष ११ मंसीरमा रहेकाले मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा त्यहा दर्शनार्थीको ठुलो भिड हुने लगभग निश्चित छ । विवाह पन्चमी जनकपुरको सबै भन्दा ठुलो मेलामा गनिन्छ ।
सि के राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेषको आदेश
at 4:25 AM Posted by Dalan
विशेष अदालतले सि के राउतलाई ५० हजार धरौटिमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । विशेषको मोहनरमण भटराई र भुपेन्द्र प्रसाद राईको ईजलासले राउतलाई धरौटिमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।
प्रहरीले राउतमाथी राज्य विपल्लवको मुद्धा लगाउदै आजीवन कारावासको माग गरेको थियो । प्रहरीले राउतले नेपालवाट मधेश टुक्राउने अभियान चलाएको र उनले लेखेको कितावहरुलाई त्यसको दस्तावेजको रुपमा विशेष समकक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । यद्यपी राउतले विशेषमा वयान लिने क्रममा आफु मधेश स्वराजको पक्षमा रहेको र मधेशलाई विभेद मुक्त गराउन अभियान चलाएको बताएको थियो ।
राउतको तर्फवाट वकालत गरेको अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोका अनुसार विशेषको आदेश संगै राउत अव रिहा हुने छ । राउत विरुद्ध मोरड प्रहरीमा सार्वजनिक मुद्धा पनि दायर गरिएकाले उनलाई प्रहरीले उक्त मुद्धामा मोरड लग्न सक्ने आकंलन गरिरहेको छ । यद्यपी अधिवक्ता महतो त्यो गैर कानुनी हुने बताए ।
कांग्रेसको ६ वा ७ प्रदेशको अवधारण प्रति तमलोपाको आपत्ति
नेपाली काग्रेसले हालै अघि सारेको संघीयताको अवधारण प्रति तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आपति जनाएको छ । तमलोपाले काग्रेस संघीयता विरुद्धको खेलमा लागेको भन्दै संघीयता नल्याउने उदेश्यका साथ पछिललो प्रस्ताव आएको बताएको छ । काग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको अवधारणा अघि ल्याएको छ ।
गएको शनिवार बसेको नेपाली काग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकले राज्य पुर्नसंरचना गर्दा ६ देखि ७ प्रदेशको अवधारणा अघि सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मधेश राजनितीको वदलिदो परिवेश
सि के राउतको पछिल्लो प्रकरणले मधेश राजनितीको परिवेश बदलिएको कुरामा कुनै दुई मत छैन । अबको मधेश राजनितीको एउटा पाटो जुन सुकै रुपमा भए पनि सिके राउत हुने नै छ । राउत मधेश राजनितीमा आज सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र भईसकेको हुन्थयो तर उनको स्वयंममा देखिएको केही अपरिपक्वक्ताका कारण उनले भविष्यमा पनि त्यो पाउलामा आज सन्देह नै छ । यद्यपी अहिले नै ठोस भविष्यवाणी गर्नु मुर्खता नै होला । सम्भवतह केही समय अझै चल्ने उनको मुद्धा मामिलाको अवस्थाले उनले राजनिती भविष्य निर्धारण गर्लान । तर एउटा कुरा त अब निश्चित के भयो भने, सि के राउत प्रकरण मधेश राजनितीको अन्य कयौन पाटालाई ठुलै धक्का दिएको छ ।
सताधारी मधेशी नेतृत्वमा देखिएको आत्मसर्मपण वादी चिन्तन र मधेशमा रहेको तीव्र उग्रवाद अहिले एक साथ प्रस्फुटन भईरहेको छ । यी दुवैले मधेशलाई अहित वाहेक अरु केही गर्न सक्दैन ।
सि के राउतको वयान सुरु
at 3:40 AM Posted by Dalan
राज्य विपल्वको मुद्धा दायर भए पछि विशेष अदालतले आज देखि सि के राउतको वयान लिन शुरु गरेको छ । हिजो मात्रै प्रहरीको तर्फ वाट सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा राउत माथी राज्य विपल्लवको मुद्धा दायर गरेका थिए ।
ऋाजको वयानमा राउत संग समान्य परिचय मात्र सोधिएको र मुल विषय वस्तूमा भोली देखि वयान हुने राउतलाई कानुनी सहयोग गरिरहेको तराई मानव अधिकार सन्जालका अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले बताए । ह्रिजनका अनुसार राउतको वयान केही दिन लम्बिने छ । वयान सकिए पछि मात्रै उनी विरुद्धको मुद्धा माथी बहस सुरु हुने छ ।
मधेश लाई नेपालवाट टुक्राउने अभियान चलाएको भन्दै मोरड प्रहरीले राउतलाई २८ भदौमा मोरडको रंगेलीवाट प्रकाउ गरेको थियो । राउतले लेखेको किताबहरु तथा उनले आफनो अभियानको क्रममा छपाएको पर्चा पम्पलेटहरु राज्य विरुद्ध डकुमेन्टहरु भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । प्रहरीको तर्फवाट उनी विरुद्ध दायर गरेको राज्य विपल्लवको मुद्धा अन्र्तगत राउतलाई हदै सम्मको कारवाही भन्दै आजीवन कारावासको माग गरिएको छ ।
सि के राउत विरुद्ध राज्य विपल्लवको मुद्धा दायर
at 2:21 AM Posted by Dalan
विशेष अदालतमा आज प्रहरीको तर्फ वाट सरकारी वकिलले सि के राउत माथी राज्य विपल्लवको मुद्धा दायर गर्दै आजीवन कारावासको दावी गरेको छ ।
राज्य विरुद्धको अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले आज सम्मको म्याद विशेष वाट ८ असोजमा पाएका थिए । २८ भदौमा प्रहरीले राउतलाई मोरडको रंगेलीवाट प्रकाउ गरेका थिए ।
सर्वोच्चले काठमाडौमा उपस्थिती गराउन आदेश दिए पछि प्रहरीले उनलाई विशेषमा लगेर अनुसन्धानका लागी म्याद मागेका थिए ।
सरकारी वकिलले दायर गरेको राज्य विपल्लवको मुद्धा अन्र्तगत अहिले विशेषमा वहस चलीरहेको छ ।
अब के हुन्छ सि के राउत को ?
असोज ८ मा विशेष वाट १४ दिने म्याद पाएका प्रहरीले २२ असोजमा उनलाई फेरी विशेष अदालत लग्ने छ । हाल सार्वजनिक मुद्धा खेपीरहेका राउत विरुद्ध प्रहरीले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको भन्दै त्यसको अनुसन्धान गरीरहेको विशेषमा जनाएको छ । राउत विरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई सर्वोच्चले ८ असोज मै खारेज गर्दै उनको स्वास्थ उपचार उनले राजेको चिकित्सावाट गराउनु पर्ने आदेश गरेको थियो । प्रहरीले मानसिक यातना दिएको भन्दै आमरन अनशन सुरु गरेका राउतको स्वास्थ्यमा समस्या देखीन थाले पछि हाल उनलाई टिचिंग अस्पतालमा राखिएको छ । आज एक विज्ञप्ति निकाली अधिकारवादीहरुले उनलाई अनशन तोडन आग्रह गरेका छन । अधिकारवादीहरुले आमरन अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएको भन्दै सरकारलाइ उनी संग वार्ता गरेर भए पनि उनको अनशन तोडाउन आग्रह गरेको छ ।
म्याद अनुरुप प्रहरीले २२ असोजमा आफनो अनुसन्धानको आधारमा राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्धा राउत माथी दायर गर्नु पर्ने हुन्छ । यदी २२ असोजको ५ बजे सम्म प्रहरीको तर्फवाट सरकारी वकिलले मुद्धा दायर गरेन भने राउत स्वतह थुना मुक्त हुनेछ । यो त्यती वेला मात्र सम्भव हुन्छ, जती वेला सरकारले चाहन्छन । राउतको रिहाईको लागी सरकार माथी दिनप्रती दिन चौतर्फी दबाब वढदै गएका कारण पहिलो सम्भवनाको रुपमा यो पनि हुन सक्छ ।
तमलोपाका नेता जितेन्द्र सोनलको घरमा चोरी
at 11:09 PM Posted by Dalan
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलको काठमाडौको वानेश्वर स्थित डेरामा हिजो राती चोरी भएको छ । सोनल अहिले छोराको उपचारको क्रममा दिल्लीमा छन सपरिवार । केही दिन अघि मात्रै विद्यालयमा खेलीरहेको वेला छोराको हाथ नराम्ररी भाचिएको थियो । तीन दिन अघि मात्रै सोनल काठमाडौवाट दशैको विदाको मौकामा सपरिवार उता तिर लागेका थिए ।
हिजो राती करिव १२ बजेको हराहरीमा डेराको मुल ढोकाको ताल्चा फेरेर चोरहरु भित्र पसेका थिए । छिमेकीहरुले थाहा पाए पछि तीनीहरु भागेको र पछि प्रहरी पनि आएका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छन ।
सोनलको डेराको मुल ढोकाको ताल्चा संगै वेड रुम र दराजको लकरको समेत ताल्चा तोडिएको छ । यद्यपी सोनल परिवार याहा नभएकाले के के चोरी भयो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
बैठक वहिष्कार गर्दै उपेन्द्र यादवले भने - सिके राउत विखण्डकारी हो
at 1:35 AM Posted by Dalan
उपेन्द्र यादवले सम्बोधन गरेको कार्यक्रमको स्थानिय पत्रिकामा आएको समाचार
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका सिके राउतलाई रिहाई को पहल गर्ने निर्णय गर्ने भए पछि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय मोर्चाको बैठक वहिष्कार गरेर सुनसरी पुगे र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिदै भने, राउत विखण्डनकारी हो - यसको पछि नलाग्नुस ।
मधेशी पार्टीहरु र एमाओवादी सम्मलीत मोर्चाको विहिवारको बैठकले सि के राउतलाई रिहाईको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मेसे पाउन वितिकै यादवले मोर्चाको बैठक वहिष्कार गरेर सुनसरी पुगे र इनरवामा पार्टीको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, राउतको पछि नलाग्नुस ।
शुक्रवार कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई राउतको रिहाईको लागी गएको मोर्चाको टोलीमा उनको पार्टीवाट कसैको प्रतिनिधीत्व थिएन ।
मुलधारको मधेशी पार्टी र संघीयता समाप्त पार्न सिके राउत पक्राउ गरेको प्रचण्डको भनाई
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सतारुढ दलहरु सुनियोजित रुपमा सिके राउतलाई पक्राउ गरेर संघीयता र मुलधारको मधेशी पार्टीहरु समाप्त पार्न लागेको बताएका छन । आज सिंहदरवारमा बसेको संघीय मोर्चाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले भने, मन्त्रीपरिषद र सतारुढ दलहरुले योजना वद्ध तरिकाले राउतलाई पक्राउ गरेर संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा लागेको बताए ।
५ ओटा मधेशी पार्टीहरु सहित जनजाती र एमाओवादी सम्मलीत उक्त मोर्चाको आज बसेको बैठकले राउतको तत्काल रिहाई हुनु पर्ने माग समेत गरेको छ । आजको बैठकमा प्रचण्डले राउतलाई पक्राउ गर्नु अघि मन्त्रीपरिषदकै बैठकमा छलफल भएको सुचना आफुले पाएको बताएको बैठकमा सहभागी एक मधेशी नेताले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च द्धारा सिके राउत विरुद्धको रिट खारेज
at 4:45 AM Posted by Dalan
सर्वोच्च अदालतले सिके विरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई आज खारेज गरेको छ । गएको २८ भदौमा मोरड प्रहरीले राउतलाई रंगेली वाट पक्राउ गरेपछि उनको रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो । राउतको पक्षवाट आज बोलेका अधिवक्ता रोशन झाका अनुसार सर्वोच्चले यो मुद्धा खारेज गरे संगै अव विशेषले उनी माथीको मुद्धा प्रक्रियालाई अगाडी वढाउने छ ।
सि के राउतको रिहाईको माग गर्दै न्यूयोर्कमा प्रर्दशन
नेपाल प्रहरीले राष्टविरोधी गतिविधीमा पक्राउ गरेका सिके राउतको रिहाईको माग गर्दै न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट महासंघको मुख्यालय अगाडी अमेरिकामा रहेका मधेशीहरुले प्रर्दशन गरेका छन ।
राउतको रिहाईको माग गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा संयुक्त राष्टमहासंघ अगाडी प्रर्दशन गरिएको न्युयोर्क वाट राम मनोहर साहले बताए । साहका अनुसार संयुक्त राष्ट संघ अगाडीको प्रदर्शनमा नेपालका जनजाती समुदायका मानिसहरुको पनि उपस्थित थियो । उनीहरुले राउतलाई नेपाल प्रहरीले गैरन्यायीक तवरले पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन ।
सिके प्रकरणमा मधेशी नेतृत्वहरुको भुमिका शंकास्पद
सिके राउतलाइ प्रहरीले मोरडको रंगेलीवाट पक्राउ गर्नु पुर्व प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले प्रमुख मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु लाई जानकारी गराएको सुचना विशवस्त सुत्रहरुले दिएको छ ।
२८ भदौमा प्रहरीले बेलुकी सात बजेको सेरोफोरोमा राउतलाई नियन्त्रण लिनु भन्दा केही घन्टा पुर्व प्रमुख मधेशी पार्टीहरुहरु का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री विच वालुवाटारमा बैठक भएको थियो ।
स्रोतले भन्यो, संसद अवरुद्धको वारेमा छलफल गर्नुछ भनेर वालुवाटारमा मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु डाकिएको थियो, संसद अवरुद्धको वारेमा समान्य छलफल पछि प्रधानमन्त्रीले मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षलाई गृहले सिके राउतलाई नियन्त्रण दिनु पर्ने रिर्पोट गरेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई पश्चात मधेशी पार्टीका अध्यक्षहरुले के प्रतीउत्तर दिएका थिए त्यो भन्ने अहिले सम्म जानकारीमा आउन सकेको छैन । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले सिके राउत र जेपी गुप्ता मधेशमा सम्भावित खतराको रुपमा रहेको भन्दै गृहले आफुलाई रिर्पोटिंग लागातार गरिरहेको र राउतलाई तत्काल नियन्त्रण नगरे मधेशमा विखण्डवादी धारको राजनिती नयां संविद्यानको जारी संगै ठुलो खतराको रुपमा आउन सक्ने बताएको थियो ।